Man of Men (2019) | MM Movie Store
2011 တုနျးက ထှကျခဲ့တဲ့ ပွငျသဈဇာတျကား “The Intouchables.” ကို remake ပွနျရိုကျထားတာပါ….နာမညျကွီး မငျးသားကွီးတှေ ဖွဈတဲ့ Sol Kyung-Gu နဲ့ Cho Jin-Woong တို့ကအဓိက ပါဝငျသရုပျဆောငျထားပါတယျ….
ဟနျဂနျြဆူ ဟာ ထိပျတနျး ဥပဒရေုံးတဈခုရဲ့ ရှနေ့ဖွေဈခဲ့ပွီးငယျတုနျး ထကျမွကျတုနျးမှာ ပိုကျဆံတှမြေားစှာရှာနိုငျခဲ့သူပါ…သို့ပမေဲ့ ကံမကောငျးလှစှာပဲ အကျဆီးဒနျ့တဈခုကွောငျ့အကွောသပွေီး လူ့လောကကွီးမှာနဖေို့ အခြိနျတောငျသိပျမကနျြတော့တဲ့ သမေဲ့နကေို့ရတှေကျနရေတဲ့လူတဈယောကျပေါ့…
မိသားစုကလညျးမရှိရှာတော့ ဂဟောတဈခုမှာသှားနရေရှာတယျ…ဒီလိုနဲ့ တဈရကျမှာ သူ့ကိုပွုစုတဲ့လူပွောငျးသှားပွီး အခွားလူတဈယောကျရောကျလာတယျ..ဒီလူက စရိုကျကွမျးကွမျး ဒေါငျ့မကြိုးတဲ့သူ…တဈယောကျနဲ့တဈယောကျစကားစပျမိတဲ့အခါမှာတော့လူမိုကျဂိုဏျးဝငျတဈယောကျဖွဈပွီး ပွဿနာမြိုးစုံရငျဆိုငျနရေတဲ့သူ ဖွဈပါတယျ…
ဒီလိုနဲ့ ဒုစရိုကျတလှကွေီးသမားနဲ့ သခေါနီးသူတဈယောကျတို့ အပွနျအလှနျ ခပျဆနျးဆနျး အပေးအယူ လုပျကွပါတော့တယျ….ဘယျလိုအပေးအယူတှလေုပျကွလဲ..တကယျရော သူတို့လုပျတဲ့အလုပျဟာ အကြိုးရှိရဲ့လား…တခွားဘယျလို့ အန်တရယျဆိုးတှရေငျဆိုငျရမလဲဆိုတာကိုတော့…ခံစားကွညျ့ကွပါဉီး..
2011 တုန်းက ထွက်ခဲ့တဲ့ ပြင်သစ်ဇာတ်ကား “The Intouchables.” ကို remake ပြန်ရိုက်ထားတာပါ….နာမည်ကြီး မင်းသားကြီးတွေ ဖြစ်တဲ့ Sol Kyung-Gu နဲ့ Cho Jin-Woong တို့ကအဓိက ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်….
ဟန်ဂျန်ဆူ ဟာ ထိပ်တန်း ဥပဒေရုံးတစ်ခုရဲ့ ရှေ့နေဖြစ်ခဲ့ပြီးငယ်တုန်း ထက်မြက်တုန်းမှာ ပိုက်ဆံတွေများစွာရှာနိုင်ခဲ့သူပါ…သို့ပေမဲ့ ကံမကောင်းလှစွာပဲ အက်ဆီးဒန့်တစ်ခုကြောင့်အကြောသေပြီး လူ့လောကကြီးမှာနေဖို့ အချိန်တောင်သိပ်မကျန်တော့တဲ့ သေမဲ့နေ့ကိုရေတွက်နေရတဲ့လူတစ်ယောက်ပေါ့…
မိသားစုကလည်းမရှိရှာတော့ ဂေဟာတစ်ခုမှာသွားနေရရှာတယ်…ဒီလိုနဲ့ တစ်ရက်မှာ သူ့ကိုပြုစုတဲ့လူပြောင်းသွားပြီး အခြားလူတစ်ယောက်ရောက်လာတယ်..ဒီလူက စရိုက်ကြမ်းကြမ်း ဒေါင့်မကျိုးတဲ့သူ…တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်စကားစပ်မိတဲ့အခါမှာတော့လူမိုက်ဂိုဏ်းဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ပြဿနာမျိုးစုံရင်ဆိုင်နေရတဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်…
ဒီလိုနဲ့ ဒုစရိုက်တလှေကြီးသမားနဲ့ သေခါနီးသူတစ်ယောက်တို့ အပြန်အလှန် ခပ်ဆန်းဆန်း အပေးအယူ လုပ်ကြပါတော့တယ်….ဘယ်လိုအပေးအယူတွေလုပ်ကြလဲ..တကယ်ရော သူတို့လုပ်တဲ့အလုပ်ဟာ အကျိုးရှိရဲ့လား…တခြားဘယ်လို့ အန္တရယ်ဆိုးတွေရင်ဆိုင်ရမလဲဆိုတာကိုတော့…ခံစားကြည့်ကြပါဉီး..